MAXAA KA JIRA IN QURBA-JOOGTA DDSI CABASHOOYIN U GUDBIYEEN SAFAARADAHA DALKA? | SOMALISTATE.COM
MAXAA KA JIRA IN QURBA-JOOGTA DDSI CABASHOOYIN U GUDBIYEEN SAFAARADAHA DALKA?
No comments JIGJIGA – Mareegta wararka ee www.faafannews.com ayaa baahisay wax ay ugu yeedhay bayaan ay soo bandhigeen qurba-joogta beesha Jidwaaq oo lagu ashkataynayo xukuumada Ismaamulka Soomaalida.
Shabakada ayaa xustay in bayaanku ku qornaa luuqadaha Ingiriiska iyo Axmaariga islamarkaana ay heshay nuqul (copy) ka mid ah. Warka ayaa lagu tilmaamay in bayaanka loo qaybiyey safaaradaha Itoobiya ee fadhigoodu yahay wadamada reer Galbeedka.
Bayaanka ayaa lagaga cabanaya xadhiga 25 oday oo sida la sheegay ay xukuumada DDSI xabsiga dhigtay. Shabakadu ma faahfaahin magaacda odayada iyo goorta la qabtay toona. Sidoo kale, lama shaacin magaacda dadka qoray bayaanka.
Qurba-joogta ayaa cambaaraysay xabsiga odayaasha iyaga oo dalbaday in si dhakso ah xoriyadooda loogu soo celiyo. Waxaa kale oo la codsaday in xukuumada federaalka ahi cadayso mowqifkeeda ku aadan wax ay qurba-joogta Jidwaaq ugu yeedhan tacadiyada ka dhacaya gobolka.
Bayaanka ayaa haddii uu u jiro sida loo dhigay muujinaya in dadka ka soo jeeda DDSI ee ku dhaqan dibaduhu ay si beel-beel ah isu abaabulayaan si ay uga xaajoodaan danahooda gaarka ah.
Waxaa xusid mudan, in madaxda DDSI ee booqda qurbaha ay dadka ula kulmaan si beel-beel ah taaso oo qurba-joog badani ka dareysay inay keeni karto qaybsanaan.
Dhanka kale, waxaa jira xogo kale oo sheegaya in codsiyo iyo dacwooyin kale oo ay qoreen dad indheer-garad ahi gaadheen madaxda sare ee Itoobiya iyo danjirayaasha Itoobiya u jooga wadamada shisheyaha qaarkood.
Warbaahinta Ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo ta dawlada dhaxe ayaan inta badan ka hadal dadka lagu xidho deegaanka Soomaalida oo tiradooda aan la qiyaasi karin. Aamusnaanta noocaas ah ayaa keentay in lagu tiirsanaado xogo kooban laga helo qaraabada dadka xidhan.
Bayaanka qurba-joogta Jidwaaq ayaa waxaa kale oo lagaga hadlay dhul ay sheegeen in dad rayid ah lagala wareegay iyaga oo ku baaqay in dhulkaas dib loogu celiyo dadkii lahaa.